Wararka - Shinva: Waxay diiradda saareysaa horumarinta tayada sare leh
17-kii Sebtembar, koox wariyeyaal ah oo ka socda Wargeysyada Dadweynaha, Wakaaladda Wararka Xinhua, Xarunta Dhexe ee Raadiyaha iyo Telefishanka, Guangming Daily, Economic Daily iyo warbaahin kale oo dhexe oo ku taal Shandong, iyo sidoo kale weriyeyaasha warbaahinta gobolka iyo dawladda hoose ee ka socda Wargeyska Mass Masspaper. Kooxda, Shandong Raadiyaha iyo Telefishanka, Shandong Business Daily iyo warbaahinta kale ee gobolka iyo degmada, ayaa galay Shinva. Diirada saar natiijooyinka isbeddelka ee tamarta cusub ee duugga ah iyo natiijooyinka horumarinta tayada sare leh.
Qaybaha saxaafadda ayaa booqday oo wareystay Shinva Cusub iyo Old Kinetic Energy Conversion Theme Exhibition Hall iyo Shinva Qalabka Daawooyinka, Alaabada Teknolojiyada Nadiifka ah iyo Cilmi-baarista Cilmi-baarista iyo Daaweynta Soo-saarista Wax-soo-saarka, waxayna sameeyeen faham faahfaahsan oo ku saabsan dufcaddii ugu horreysay ee mashaariicda la doorbiday "Sninva Biopharmaceutical Qalabka iyo Mashruuca Warshadeynta Wax soo saarka Caafimaadka Sawirka ”Maktabadda Mashruuca Weyn ee Cusub iyo Hore ee Isbadalka Tamarta ee Gobolka Shandong.
Wang Yuquan, kuxigeenka xoghayaha xisbiga iyo maareeyaha guud ee Shinva, ayaa booqashada ku weheliyay bahda saxaafada. Waxay sidoo kale u soo bandhigtay bahda saxaafadda horumarka tayada sare leh ee Shinva, wax soo saarka asaasiga ah iyo teknoolojiyadda asaasiga ah ee la xiriira sida jeermiska diirimaadka heerkulka hoose ee peracetic ee ku dhashay Shinva, hogaamiyaha sare ee hawada sare iyo xawaaraha sare ee elektaroonigga caafimaad ee Shiinaha. , iyo mashiinka balaastigga ah ee mashiinka wax lagu buuxiyo oo saddex-mid ah (BFS) oo jebiyey kaligiis ajnebiga ah.
Wareysiga waxaa looga dan leeyahay in si guud loo faafiyo loona hirgaliyo ruuxda xoghayaha guud Xi Jinping khudbadiisa muhiimka ah ee Symposium ee ilaalinta deegaanka iyo hormarinta tayada sare leh ee wabiga dooxada Yellow, iyo in si buuxda loo muujiyo sahaminta hal abuurka iyo natiijooyinka wax ku oolka ah ee ay qabteen gobolkeena ee kor u qaadista deegaanka. ilaalinta iyo horumarinta tayada sare leh ee Dooxada Yellow River, iyadoo maanka lagu hayo aaminaada. Anigoo ah wakiil ka socda warshadaha soo baxaya, Shinva waxay u hogaansantay siyaasada istiraatiijiyadeed ee "isdhexgalka, kor u qaadista iyo hagaajinta waxtarka leh" sanadihii la soo dhaafay, alaabooyinka tiknoolajiyada sare oo si qoto dheer loo beeray, waxay diirada saareen isbedelka tamarta cusub iyo tan jir, waxayna si aan macquul aheyn u raacday wadada horumar tayo sare leh. Markan koox-wadeennada saxaafadda ayaa galay Shinva, iyagoo diiradda saaraya fahamka horumarka tayada sare leh ee Shinva.